« Kanton’i Gasikara »: antsoina ny mpanao asa tanana hiditra anatin’ny ara-dalàna | NewsMada
Tafakatra 21 ireo ahina nikasa hamono ny filoha: miaramila sy zandary 12 ahitana jeneraly dimy voasambotra
Affaire « Apollo 21 »: 21 interpellations, 14 personnes en garde à vue
Nandeha mafy ary vaky kodiarana : maty tsy tra-drano ilay pretran’Antsampandrano
Conjoncture: les Forces armées réitèrent leur loyauté envers le chef de l’Etat
« Kanton’i Gasikara »: antsoina ny mpanao asa tanana hiditra anatin’ny ara-dalàna
Par Taratra sur 23/06/2021
Nisokatra eo Antaninarenina, omaly hatramin’ny 25 jona izao ny « Kanton’i Gasikara », andiany faha-5, nomena anarana hoe « Miarina ». Fampisehoana ireo karazana asa tanana malagasy.
Ankoatra ny fahita mahazatra, toy ireo asa tanana vita amin’ny hoditra, ao koa ireo karazan-tsakafo, savony, menaka fanao amin’ny tarehy, sns, hita amin’io « Kanton’i Gasikara » io. « Miisa 157 ny karazana asa tanana vita malagasy. Avadika ny fomba fijery, tsy ho vadin’asa intsony ny asa tanana fa fihariana mahavelona » hoy ny tale jeneralin’ny Asa tanana, Ramanankavana Christian, nanokatra ny fotoana.
Nisy ny fifampiresahana nataon’ireo tompon’andraikitra nitsidika ireo tranoheva 25. Mila tohana amin’ny lafiny maro ny mpanao asa tanana fa fepetra apetraka ny fidirana ao anatin’ny ara-dalàna. Maromaro ireo laminasan’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana, toy ny fanomezana « carte numérique ». Ny fiaraha-miasa amin’ny Foiben’ny hetra ho an’izay anatin’ny ara-dalàna. Tsinjovina ihany koa ny fahasalamana sy ny fisotroan-dronono.
Hahafahana mivelatra bebe kokoa
« Vonona hatrany ny minisitera, koa miantso ireo mpisehatra hifampiresaka hanatsarana ny tsena eto an-toerana na any ivelany », hoy ny tale jeneraly. « Maro ny tombontsoa sy varavarana hisokatra raha manana io carte numérique io. Eo koa ny fanofanana sy fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka. Manerana an’i Madagasikara no misitraka izany », hoy ihany ny tale jeneraly.
Ho avy tsy ho ela ny tsenaben’ny hoditra, sehatra tokony ho tohanana manokana. Eo am-pikarakarana izany ny minisitera. Ny fampisehoana manaraka “Kanton’i Gasikara” hatao any Vatovavy Fitovinany hiarahana amin’ny Vondron’ny vehivavy mpandraharaha. Hasaina ny Malagasy hanjifa ny “vita malagasy”.
Fifanandrinana tamin’ny dahalo: takin’ny fokonolona ny hamoahana ireo zandary migadra 02/08/2021
Tsiroanomandidy-Fenoarivobe: amboarina ny ampahan-dalana 32 km 02/08/2021
Ravinala Airports: nahazo fanamiana ny mpamonjy voina Tanjombato 02/08/2021
Mahajanga: foibe « cyber école » voalohany 02/08/2021
Fiainana antoko: maka bahana amin’ny fihaonambe nasionaly ny MMM 02/08/2021